ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နဲ့အတူမကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Mi Mix 2s! – AsiaApps
March 12, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နဲ့အတူမကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Mi Mix 2s!
Mi Mix2ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Mi Mix 2s ဟာ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နဲ့ရောက်ရှိလာမယ့်အကြောင်းကို Xiaomi ဟာ Weibo account ကနေတဆင့် Teaser ပုံရိပ်လေးတစ်ခုနဲ့ ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi ဖော်ပြလိုက်တဲ့ Teaser ပုံလေးဟာ မိုးကြိုးသင်္ကေတနဲ့ Charging Pad လေးပါဝင်နေတာကြောင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ် ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိရှိနိုင်မှာပါ၊
Mi Mix 2s ကို လာမယ့် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်မယ့်နေရာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရှန်ဟိုင်းမြို့တော်ကြီးမှာပါ။ အရွယ်အစား ၅.၉၉ လက်မရှိပြီး OLED display နဲ့ တွေ့မြင်ရမယ့် Mi Mix 2s ဟာတော့ Xiaomi ရဲ့ပထမဉီးဆုံး ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအဖြစ်ရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ဟာ Mi7မှာပါဝင်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ သတင်းအရင်ထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့မှာတော့ သတင်းသိပ်မကြားမိတဲ့ Mi Mix 2s မှာပါဝင်လာဖို့ အခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
Teaser ပုံရိပ်လေးနဲ့သာဖော်ပြထားတာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကတော့ တိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပါဘူး။ ပုံမှာပါဝင်တဲ့ Charging pad လေးကိုကြည့်ရင် iPhone X ရဲ့ Wireless Charging အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ တူညီမယ်လို့တော့ခန့်မှန်ထားနိုင်မှာပါ။